दुई खर्ब ८२ अर्बका उद्योग खुल्दै, रोजगारी सिर्जना कति ? – Nepali News
Home/Nepali News/दुई खर्ब ८२ अर्बका उद्योग खुल्दै, रोजगारी सिर्जना कति ? – Nepali News
६ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ४३६ वटा नयाँ उद्योग दर्ता गरिएका छन् । ती उद्योगमा दुई खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीको योजना छ ।
उद्योग विभागका अनुसार, कृषि तथा वनजन्य, निर्माण, ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, खनिज, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा नयाँ उद्योग सञ्चालन हुन लागेका छन् । आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा नयाँ उद्योगमा आएको लगानी, उद्योग दर्ता संख्या र रोजगारी सृर्जना दर अघिल्लो वर्षभन्दा न्यून हो ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल ४ सय ९८ उद्योगका लागि ३ खर्ब ५० अर्ब ७३ करोड २१ लाखभन्दा धेरै लगानी आएको थियो । त्यस वर्ष ४९८ उद्योग दर्ता भएका थिए जसबाट २७ हजार ३ सय ८२ वटा नयाँ रोजगारी सिर्जना भए । यो संख्या गत वर्ष ५ हजारभन्दा धेरैले घटेको छ ।
आव ०७५/७६ मा ४३६ उद्योगले २२ हजार ९६१ जनालाई नयाँ रोजगारी सृर्जना गरेको विभागको १२ महिनाको तथ्यांङ्कमा उल्लेख छ । लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदा नयाँ रोजगारी सिर्जना पनि निराशाजनक देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका गरी २७ वटा उद्योग कृषि तथा वनजन्य क्षेत्रमा थपिएका छन् । कुल ९ सय ९२ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने यी उद्योगमा ४ अर्ब १० करोड ६० लाख लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । यस क्षेत्रमा आएको लगानी, उद्योग संख्या तथा रोजगारी सिर्जना अघिल्लो वर्षभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष ६५३ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी २२ उद्योगमा २ अर्ब ५१ करोड हाराहारी लगानी भएको थियो ।
निर्माण क्षेत्रमा यस वर्ष नयाँ उद्योग आउने क्रम घटेको छ । अघिल्लो वर्ष निर्माण क्षेत्रका ४ उद्योगमा ४ अर्ब ७३ करोडभन्दा धेरै लगानी आएको थियो । ती उद्योगबाट २५३ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी मिल्ने भनिएको थियो ।
तर यस वर्ष यस क्षेत्रमा जम्मा ३ उद्योग मात्र दर्ता भएका छन् । यी उद्योगका लागि एक अर्ब लगानी हुने र १५३ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने बताइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड ५६ लाख ५० हजार बराबरको ३९ उद्योग दर्ता भएका थिए । यी उद्योगले दुई हजार ५९६ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमता थियो । यो वर्ष ४७ यस्ता उद्योगमा २ खर्ब १० अर्ब ४० करोड २६ लाख २० हजार कुल पुँजी भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा झण्डै २३ अर्बले लगानी कम भित्रिए पनि उद्योग संख्या र नयाँ रोजगारी सिर्जना दर भने बढेको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा यस वर्ष ५७ करोड ७२ लाख ८० हजार लगानीको २१ उद्योग दर्ता भएका छन् । यी उद्योगले ९१८ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने बताइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष एक हजार ८८ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी ७५ करोड लगानी भित्रिएको थियो ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १० हजार ६६७ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी ११८ उद्योग स्थापना भएका छन् । यसका लागि कुल पुँजी ५० अर्ब ६ करोड ४९ लाख ४० हजार लगानी भएको छ । गत वर्ष यस क्षेत्रमा ७७ अर्ब बढी लगानीमा १३२ उद्योग दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको थियो । अघिल्लो वर्ष १२ हजार ३२२ जनालाई रोजगारी सिर्जना हुने भनिएको थियो ।
खनिजजन्य उद्योगमा एउटा मात्रै उद्योग दर्ता भएको छ । कुल पुँजी १२ करोड ८० लाख रहेको उक्त उद्योगले ८५ जनालाई रोजगारी दिन सक्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस क्षेत्रमा कुल पुँजी २ अर्बभन्दा धेरै रहेका ४ उद्योग दर्ता भएका थिए ।
यसैगरी, सेवामूलक क्षेत्रमा यस वर्ष ३ हजार ६६७ जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी १०१ उद्योग दर्ता भएका छन् । कुल पुँजी ५ अर्ब ४५ करोड ६५ लाख ५० हजार बराबरको लगानीको प्रतिवद्धता भएको छ । अघिल्लो वर्ष सेवामूलक क्षेत्रमा ११४ उद्योग दर्ता भएका थिए । ती उद्योगमा ५ अर्ब १२ करोडभन्दा धेरै लगानी हुने भनिएको थियो ।
पर्यटन क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को १२ महिनामा ११७ उद्योग दर्ता भएका छन् । कुल चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ४ करोड ४ लाख ४० हजार रहने यस्ता उद्योगले ३ हजार ७ सय ६ जनामा रोजगारी सिर्जना गर्ने छ । अघिल्लो वर्ष यस क्षेत्रमा १५९ उद्योगका लागि २३ अर्बभन्दा बढी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो ।